Natation : Antsa Rabejaona s’offre un nouveau record national - ewa.mg
Natation : Antsa Rabejaona s’offre un nouveau record national
News - Natation : Antsa Rabejaona s’offre un nouveau record national
Une bonne nouvelle pour la natation malgache. La sirène du Managing club, Holy Antsa Rabejaona, a pulvérisé son ancien record national sur 50m papillon au championnat de Tatarstan en Russie, le week-end dernier. En effet, elle a enregistré un chrono de 28sec83 contre 29sec50 qu’elle avait signé lors du championnat national en mars 2021. La multiple championne de Madagascar est actuellement à Kazan. Elle a obtenu une bourse d’une année au centre de préparation de nageurs de haut niveau.
L’article Natation : Antsa Rabejaona s’offre un nouveau record national a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Voina tany Maevatanana :: Trano roapolo sy olona arivo lasibatry ny toho-drano vaky
Dibo-drano ny 70%-n’ny tanàna antsoina hoe Mahazoma, any amin’ny distrikan’i Maevatanàna, noho ny tondra-drano niseho, afak’omaly maraina. Nandrava trano roapolo sady niteraka olona tra-boina roa sy arivo ny fahavakisan’ny toho-drano, avy amin’ny rotsak’orana be tany an-toerana. Manomboka nidina kosa ny haavon’ny rano nameno ny tanàna, omaly. “Misy renirano manakaiky ny tanàna saingy simba, efa ho folo taona lasa izay, ny toho-drano teo. Tsy tana intsony ny rano ka nitobaka taty antanàna, tamin’ny zoma 5 marsa sy ny alakamisy 11 marsa. Io niseho farany io no mafy indrindra ary nandrava trano am-polony, toy ny fiangonana sy tsena. Nafindra amina sekoly eny amin’ny faritra avo sy any amin’ny fianakaviany ireo tra-boina”, hoy ny fampitam-baovao avy amin-dRazafindrafara Norotiana Fleure, ben’ny tanànan’i Mahazoma. Efa nikarakara an’io toho-drano simba io ny fokonolona, teo aloha, saingy niala maina. Mangataka amin’ny tompon’andraiki-panjakana izy ireo hijery akaiky izany satria sarotra sy mila tetibola goavana ny fanarenana hisorohana ny loza hafa. L’article Voina tany Maevatanana :: Trano roapolo sy olona arivo lasibatry ny toho-drano vaky est apparu en premier sur AoRaha.
Kitra – Nanaiky hiverina ho Barea i Bolida
Anisan’ny vaovao lehibe nambaran’i Nicolas Dupuis, omaly, ny fiverenan’i Lalaina Nomenjanahary (Bolida), handrafitra indray ny Barea de Madagascar. Nisy ny fifampiresahana nataon’ny minisitry ny Fanatanjahantena, i Tinoka Roberto sy ny Federasiona ary ny mpanazatra taminy, ny amin’ny tokony hilalaovany any Etiopia. Fifampiresahan’ny raiamandreny sy ny zanaka no nisy tamin’izany ka nanaiky i Bolida ary tena feno hafaliana, noho ny rehetra, araka ny filazan’i Nicolas Dupuis, ny hisalorany indray ny fanamian’ny Barea de Madagascar, amin’ity. Nanambara ny fahavononany hanome ny heriny rehetra amin’ireo lalao roa farany hifandonana amin’i Etiopia sy i Niger ny tovolahy. Niravona izany ny disadisa teo aminy sy ny federasiona, izay nambarany fa tsy nanisy lanjany ny tsy fahasalamany ka nahatonga ny kliobany tsy namela azy hanao Barea de Madagascar intsony.Samy nanamafy ny FMF sy ny MJS fa olona afaka mitondra ny fahaiza-manaony ao anatin’ny ekipam-pirenena malagasy i Bolida. Tsy amin’ny lalaon’i Etiopia ihany fa ho eo ihany koa izy amin’ny fihaonana amin’i Niger, izay hatao any Toamasina. TompondakaL’article Kitra – Nanaiky hiverina ho Barea i Bolida a été récupéré chez Newsmada.
Fanafihana teny Ivato :: Japoney maty niantefan’ny bala teo amin’ny fony
Bala niantefa teo amin’ ny fony noho ny fiarovany ny vadiny tamin’ny fanafihanjiolahy no nahafaty tsy tradrano an’ity Japoney iray, monina eny amin’ny Cité Seimad Ivato, afak’omaly vao maraina be. Jiolahy enina misaron-tava sady mirongo basy no niditra an-keriny tao an-tokantranon’izy mivady, tokony ho tamin’ny 4 ora latsaka. Tafiditra hatrany amin’ny efitra fandriana ireo jiolahy. Valizy feno vola “Nitondra basy mahery vaika “fusil à pompe” ireo mpanafika. Nopoirin’izy ireo ny varavaran’ny trano. Niaro ny vadiny sy ny tenany ilay raimpianakaviana no notifirin’ ireo jiolahy avy hatrany ka voa teo amin’ny fony”, araka ny fitantaran’ny niharamboina tamin’ireo mpitandro filaminana. Lasan’ireo jiolahy taorian’ izay ny valizy nisy vola telo tapitrisa ariary sy solosaina finday. Tonga teny an-toerana ny zandary avy eny Mandrosoa vantany vao naharay fampandrenesana saingy tsy nahatratra ireo jiolahy intsony. Nentina teny amin’ny tranompatin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona ny razan’ilay vahiny natao fitsirihana, omaly. Loakan’ny bala teo amin’ny tratrany. Voalaza fa balana basimborona “calibre 12” no niditra tamin’ny vatany, araka ny loharanom-baovao hatrany. Manao fikarohana an’ ireo olon-dratsy ny mpitandro filaminana eny Mandrosoa, hatramin’ny omaly. Nisy ny fampiasana alika mpitsongo dia. L’article Fanafihana teny Ivato :: Japoney maty niantefan’ny bala teo amin’ny fony est apparu en premier sur AoRaha.